SEO လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အများစုသည်နောက်ပြန်ဖြစ်သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 3, 2012 တနင်္လာနေ့, ဇွန်လ 10, 2013 Douglas Karr
ငါအခုအချိန်မှာ webinar နားထောင်နေပါတယ် Search Engine Optimization (SEO) ဒါကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးစေတယ် webinar တွင်ပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြသောမက်ထရစ်သည်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည် ဘယ်နှစ်ယောက်လင့်များ ထုတ်လုပ်မဟာဗျူဟာနှင့် သော့ချက်စာလုံးများ၏ volumes ကို ကြောင်းမဟာဗျူဟာအတွက်ချထားခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးမှု ဘာသာပြောင်း။ အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးမှု ဆက်စပ်မှု။ အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးမှု ပရိသတ်။ အဘယ်သူမျှမဆွေးနွေးမှု ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း။ ဆွေးနွေးမှုသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းယှဉ်ပြိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုအဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်တင်ရန်မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သမျှများများရအောင်သင်မည်သို့ဆွဲထုတ်နိုင်မည်နည်း။ မင်းရဲ့ logo ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့တင်ပါးပေါ်တင်ပြီး Youtube မှာဘာကြောင့်မထည့်တာလဲ။ သငျသညျလညျးလညျးဆီလျှော်အသွားအလာအများကြီးရလိမ့်မယ် ... ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းလိမ့်မည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း crap နည်းများကိုအမြဲတမ်းကျင့်သုံးနေကြပြီ ၏အသက်အရွယ်မဟာဗျူဟာ မျက်လုံးများပိုမို စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်လက်။ ဒဏ္myာရီကတော့လူတိုင်းကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ဆွဲဆောင်သင့်သည်။ ထိုအုပ်စုအတွင်း၌သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့မဟာဗျူဟာကျရှုံးသည်ကိုထပ်ခါထပ်ခါမြင်တွေ့ရသော်လည်းစျေးကွက်သမားများကအမြဲတမ်းထိုအရာကိုပြန်သွားကြသည်။ မျက်လုံးများပိုမိုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။
မမှန်ပါဘူး ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ပါတယ် SEO ဆိုသည်မှာကျော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး.
သူတို့ကိုယ်သူတို့ SEO ကျွမ်းကျင်သူတွေရောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်အံ့သြနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အွန်လိုင်း visitors ည့်သည်တွေဘယ်လိုဂရုမစိုက်လဲ ဖောက်သည်သို့ကူးပြောင်း။ ဖောက်သည်ကိုသူတို့စကားမပြောမီ၊ သူတို့သည်အဆင့်များကိုရှာဖွေကြသည်၊ အသံအမြင့်ဆုံးသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာပြီး၎င်းတို့ကိုမည်သို့တိုက်ခိုက်မည်ကိုစျေးကြီးသောအကိုးအကားများလွှင့်ပစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
သငျသညျအွန်လိုင်းထူထောင်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုရင်, သင် ပြီးပြီ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အွန်လိုင်းမှမည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းအချက်အလက်ရှိသည်။ ငါမပြောခဲ့ဘူးသတိပြုပါ ဘယ်မှာလဲ အသွားအလာ မှလာသည်။ ငါက ဘယ်မှာလဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဆိုလိုသည် analytics သင်၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အလားအလာကို ဦး တည်ပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်သည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်။
သင်ရရှိသောအသွားအလာအများစုမှာဤအပိုင်းနှင့်မတူပါ။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်ဘယ်တော့မှစီးပွားရေးလုပ်မည်မဟုတ်သော from ည့်သည်များထံလည်ပတ်မှုများပိုမိုရရှိကြောင်းသင်အဘယ်ကြောင့်ဂရုပြုမည်နည်း။ သေချာတာပေါ့၊ ဒီရှေးရှေးတချို့ကမင်းရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတခြားလူတွေကိုဝေမျှလိမ့်မယ်။ သင်မျှဝေမှသာဒါကဖြစ်ပျက် မှန်ကန်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ.
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုပါစို့၊ ရလဒ်များကိုမောင်းသောသော့ချက်စာလုံးများကိုစတင်ပြီးစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်နောက်သို့ပြန်လှည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အရောင်းကိုမောင်းနှင်နေသောသူများနှင့်ပတ်သက်သောသော့ချက်စာလုံးများပေါ်တွင်အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား။ သင့်ရဲ့အရောင်းတိုးမြှင့်နိုင်အောင်အဲဒီသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သူတို့အားစာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံးဖြင့်စတင်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်အမြီးရှည်ပြီးအလုပ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။
ယခုတွင်သင်သည်မျက်ခုံးများထက်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်၏ SEO အားထုတ်မှုများသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ် Going ၏ခန္ဓာဗေဒ
ဧပြီ 4, 2012 မှာ 5: 07 AM
ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရ၊ seo တွင်ရလဒ်များဖြစ်ပေါ်စေမည့်သော့ချက်စကားလုံးများကိုဖော်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသော့ချက်စာလုံးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းကိုအွန်လိုင်းတွင်လူများကမည်သို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာခွဲခြားနိုင်စေရန် google adwords campaign အနည်းငယ်ဖြင့်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ 1 လပြီးနောက်တွင် အော်ဂဲနစ်ရလဒ်များအတွက် ကောင်းမွန်သော optimization ပြုလုပ်ရန် သင့်တွင် ဒေတာအလုံအလောက်ရှိနိုင်သည်။
ဧပြီ 4, 2012 မှာ 10: 16 AM
တကယ်ကို အလုပ်ဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုရွေးချယ်ခွင့်မပေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့အား ပြောဆိုရန် ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။ PPC မှတဆင့် ရာနှင့်ချီသော ပေါင်းစပ်မှုများကို သင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ထည့်သွင်းပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။